Jabka Fallaagaddii Weerartay Belad-Xaawo Waxay Bannaanka Keenay Dhagar Dadnayd! | JAMHURIYADDA
Home Diblomaasiyadda Jabka Fallaagaddii Weerartay Belad-Xaawo Waxay Bannaanka Keenay Dhagar Dadnayd!
Jabka Fallaagaddii Weerartay Belad-Xaawo Waxay Bannaanka Keenay Dhagar Dadnayd!
Guddiga xaqiiqo raadinta ee loo xil-saaray baarista jabhad ka dhan ah Soomaaliya oo lagu hubeynayo degmada Mandheera ee Kenya, ayaa soo bandhigtay natiijada baaritaankooda. Guddigan waxaa lagu unkay shir madaxeedkii aan caadiga aheyn ee urur goboleedka IGAD ee ku qabsoomay dalka Jabuuti bishii Decembar 2020.
Guddiga ayaa dhawaan ku warbixiyay inaan caddaymo sax ah loo hayn in Kenya ay faraggelisay arrimaha gudaha Soomaaliya! Warbixinta waxaa si raynrayn leh u soo dhaweeyey dawladda Kenya iyo mucaaradka Soomaaliyeed, balse waxaa waxba kama jiraan iyo been la dhoodhoobay ku tilmaamay Wasiirka Warfaafinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe.
Soomaaliya maxay qoonsatay, maxaase farxad-geliyay Kenya iyo Mucaaradka Soomaaliya?
Wasiir Dubbe ayaa yiri “Wax alla wixii ay Soomaaliya dhibsanaysay oo ay sheegatay, guddigii xaqiiqo raadinta Jabuuti ka socday waxba kama jiraan ayay ka soo qaadeen”. Wasiir Dubbe ayaa ku eedeeyay guddiga inaysan dhexdhexaad ka noqon baarista, runtana aysan abbaarin.
Guddiga waxay diideen inay booqdaan degmada Belad-Xaawo;
Guddiga waxay dafireen in ciidanka Kenya ee qaybta ka ah AMISOM, ka baxeen deegaamada Buusaar iyo Faafax-dhuun, iyagoo aan wargelin Soomaaliya, taasoo ay dhibaato ka soo gaartay dadka deegaannadaas, marnaanta amniga awgeed;
Guddiga waxay qiil u bixiyeen xubnihii metalayay dowladda Kenya ee ku xadgudbay “hawada – air space”-ka Soomaaliya si ay uga qayb galaan caleemo-saarkii Axmed Madoobe.
Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in guddiga uu magacaabay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, ay la sameeyeen wadashaqayn si ay runta u gaaraan, “waxaan tusnay caddaymo beeninaya eedeymaha Soomaaliya, waxaana guddiga laga caawiyey inay booqdaan xuduudda Kenya iyo Soomaalia” sidaas ayaa lagu xusay qoraalka.
Dhabannahays iyo amakaag ayay muwaaddiniinta Soomaaliyeed ku noqotay warbixinta guddiga iyo weliba taageerada ay mucaaradka Soomaaliyeed u muujiyeen warbixin runta ka fog, oo dhaawacaysa amniga qaranka.
Haddaba maxaa mideeyey Kenya iyo Mucaaradka dalka?
Duullaanka ay ku soo qaadeen magaalada Belad-Xaawo Jabhad ku howlgelaysa magaca Jubbaland, balse ka amar qaadata dowladda Kenya waxuu ahaa mid ay in muddo ah u “shin tirinayeen” mucaaradka, Kenya iyo Jabuuti. Waxayna aaminsanaayeen in haddii ay Kenya qabsato Belad-Xaawo, iyadoo adeegsanaysa “dalladda” Jubbaland ay araxda ka jabin doonto maamulka Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo, islamarkaasna ku qasbi karta inuu ka tanaasulo qodobbo ka mid ah heshiikii “Septembar 17” ee doorashada dadban.
Wasiir Dubbe oo ujeeddada duullaanka bidhaamiyey ayaa su’aal geliyey xilliga lagu soo beegay warbixinta, waxaana uu yiri “Maxaa isku soo beegay 25-ka Janaayo iyo warbixinta! Kenya waxay doonaysay inay Gedo ku qabsato jabhad sidaasna lagu beri yeelo, oo la yiraahdo Kenya kuma jirin”.
Mucaaradka iyo Kenya waxay doonayeen inay xaqiijiyaan guuldarrada dib-u-doorashada Farmaajo, intaan la gudaggelin howlaha doorashada, taas oo ah tan keentay inay mucaaradka diidaan:
Sharciga doorashooyinka ee dastuurka tilmaamayay;
Maamulka doorashooyinka ee Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka GMDQ;
Go’aamaddii shirkii Dhuusomareeb 3; iyo
Fullinta heshiiskii doorashada dadban ee “Septembar 17”.
Duullaanka fallaagada ay abaabushay Kenya iyo “Shahaado Suurka” guddiga IGAD ee Jabuuti isku koobtay waxuu bannaanka keenay sida ay maamulka Ismaaciil Cumar Geelle raali uga ahayn in mar kale Soomaaliya madaxweyne u doorato Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo damiir xumida musharraxiinta mucaaradka ah ee loolanka kula jira Farmaajo!
Previous articleWhat Do Case Studies Tell Us About [Somalia] Addressing Corruption In Public Procurement?
Next articleYaa Bixiya Kharashka Ololaha Doorashooyinka Madaxtinimada Soomaaliya!